Nilatsaka ny baiko avy amin’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka fa tsy mahazo mitazona basy intsony manomboka izao ny polisy mpianatra asa rehetra manerana an’i Madagasikara.
« Efa vita avokoa ny fombafomba rehetra tokony ho natao noho iny fahafatesana iny. Efa vita famotorana ilay tovovavy zana’ilay tompon-trano. Natao famotorana ihany koa ilay polisy nahatifitra ilay namany », hoy ny kaomisera Razatovo Tonny, lehiben’ny Sag na andian’ny polisy miady amin’ny asan-jiolahy mahery vaika. Raha tsiahivina dia ny zoma alina tokony tamin’ny 11 ora sy sasany no nitrangan’ity fitifirana teo amin’ny samy mpitandro ny filaminana ity.
Nikasa ny hisambotra jiolahy tao amina tranon’olona iray ireo polisy ka andeha hanatitra ny zanak’ilay tompon-trano no nifanena tamin’ny zanaky ny mpanofa tao amin’ilay trano ihany ary nifampitolona taminy. « Ilay polisy faharoa no nitifitra ka nahafaty ilay polisy nandeha teo alohany sy ilay olona nitolona ity farany », hoy ny avy amin’ny polisy. Bala telo no nahafaty ilay polisy ary bala telo tahaka izay ihany koa no nahafaty ilay tovolahy voalaza fa nifampitolona tamin’ilay polisy.